ရခဲ့တဲ့ဘွဲ့နဲ့ ရွေးချယ်မယ့် career လမ်းကြောင်းမတူတဲ့အခါ - VCS
ရခဲ့တဲ့ဘွဲ့နဲ့ ရွေးချယ်မယ့် career လမ်းကြောင်းမတူတဲ့အခါ August 15, 2020
ရခဲ့တဲ့ဘွဲ့နဲ့ ရွေးချယ်မယ့် career လမ်းကြောင်းမတူတဲ့အခါ
လူငယ်တွေတော်တော်များများဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ပြီဆိုတာနဲ့ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာမှာ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရကြပါဘူး။ ရတဲ့အမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီး မိဘက တွန်းအားပေးတဲ့ကျောင်းကိုသာ တက်ရတာမျိုးပေါ့။အထူးသဖြင့် တခြား major တွေထက်ပိုပြီး နှစ်ရှည်တက်ရလေ့ရှိတဲ့ ဆေးကျောင်း နည်းပညာကျောင်းတွေကိုသာခြေစုံပစ်ဝင်ကြရတာပါ။ ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမယ့်အခါမှာတော့အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းခံပြီးယူလာတဲ့ဘွဲ့နဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ career ကြားမှာ စဉ်းစားရကြပ်စရာတွေ ဖြစ်လာပါပြီ။ ဥပမာကိုယ်က computer နဲ့ ဘွဲ့ရထားပေမယ့် coding တွေ networking တွေ လုံးဝစိတ်မဝင်စားတာမျိုးပေါ့။ ဒီ article မှာကိုယ့်ရဲ့ဘွဲ့နဲ့ လုံးဝမဆိုင်တဲ့ career လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေသွားချင်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ်လုပ်ချင်တာနဲ့ မလုပ်ချင်တာကို ခွဲခြားသိပါ။
အထက်မှာပြောထားသလိုမျိုး ကိုယ်က computer နဲ့ ဘွဲ့ရထားပေမယ့် coding တွေ networking တွေ လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူး ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်လုံးဝမလုပ်ချင်တာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်သလဲ? ဘွဲ့ရခါစလူငယ်အများစု လမ်းပျောက်ကြတာ ဒီနေရာမှာပါ။ sales & business development ပိုင်းပဲ စိတ်ဝင်စားသလိုလို၊ digital marketing ပိုင်းမှာပဲ အားသာသလိုလို၊ administration ပိုင်းပဲ လိုက်ရတော့မလိုလို၊ ဒီကြားထဲ အိမ်က မိသားစုက အစိုးရဝန်ထမ်း လုပ်စေချင်သေးတာမျိုးပေါ့။ ဒီတော့ ကိုယ့် passion ကို သိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? သိအောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းမျိုးစုံရှိရာမှာ လောလောဆယ် လက်တွေ့အသုံးချနေမိတဲ့ နည်းလမ်းကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ google ခေါက်ပါ၊ LinkedIn သုံးပါ၊ senior တွေဆီက အကြံတောင်းပါ။ google မှာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့် အလုပ်အကိုင်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ skill တွေ၊ job description တွေ၊ salary information တွေ၊ development opportunity တွေကို တသီကြီး လိုက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ LinkedIn မှာရှိတဲ့top professional တွေထဲက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ field တွေမှာ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ profile ကို လေ့လာပါ။သူတို့ ဒီနေရာကို ရောက်အောင် ဘယ်အဆင့်တွေဖြတ်ရသလဲ၊ ဘယ်နေရာကနေ စခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လို skill တွေရှိနေသလဲ ဆိုတာမျိုးကို ကောင်းကောင်းကြီး learn လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခြားလူတစ်ယောက်ဆီက အကြံဉာဏ်တောင်းဖို့သင်ယူဖို့လည်း ဘယ်တော့မှ ဝန်မလေးပါနဲ့။
(၂) ကိုယ့် passion နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးနေရာကို ရွေးချယ်ပါ။
ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်သလဲဆိုတာကို အတိအကျ သိနေပြီဆိုတာနဲ့ ဒီ career နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို မျက်ခြေအပြတ်မခံဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်အတွက် career development & learning opportunity ကောင်းကောင်းရနိုင်မယ့် organization တွေကို လေ့လာပြီး အလုပ်လျှောက်ပါ။ အလုပ်သစ်မှာ ရေရှည်မြဲဖို့ကလည်း အရေးကြီးလို့အလုပ်မဝင်ခင်ကတည်းက သေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ဘွဲ့နဲ့ မတူတဲ့ career လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်လို့ ဒီ career အတွက် လိုအပ်မယ့် skillset တွေကို သေချာသိထားသင့်သလို source ပေါင်းစုံကနေလည်း သင်ယူလေ့လာနေဖို့ လိုပါတယ်။
(၄) ရထားတဲ့ဘွဲ့က အလကားဖြစ်သွားပြီလားလို့ ဘယ်တော့မှ မတွေးပါနဲ့။
တက္ကသိုလ်မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့စာတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အလကားမဖြစ်သွားပါဘူး။ ကိုယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းကို ရွေးရွေး တက္ကသိုလ်ကပညာတွေကို လက်တွေ့ အသုံးချလို့ရနေသေးတယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အသိပညာ အခြေခံအုတ်မြစ်ပါ။ ရခဲ့တဲ့ဘွဲ့အတွက် ပေးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအတွက် နောင်တရတာဟာကျရှုံးခြင်းတမျိုးပါပဲ။
Comments (0 ) LeaveaComment